Indlela yokuthuthukisa iwebhusayithi yami ye-SEO yamazwe omhlaba?
Namuhla, umhlaba wedijithali wanamuhla weWeb uya ngokuya emhlabeni jikelele. Kusukela e-European Union ehlanganiswe nokufinyeleleka kwe-inthanethi ngama-80%, kwezinye izifunda ezithuthukisiwe kakhulu ezinezindawo ezingaba ngu-90%. Izinombolo zangempela zingase ziqiniseke ngisho nakakhulu e-China nabasebenzisi abangaba yizigidi ezingu-731, noma kunjalo, okumele kube yingxenye yesilinganiso sabantu esilinganiselwayo. I-intanethi inikeza amathuba amaningana amaningana kulabo abanikazi bewebhu abazimisele ukubhekwa kuwo wonke umngcele, kungekho zithiyo zamasiko. Ukuze uphumelele kulokhu, noma kunjalo, noma ubani osomabhizinisi onthanethi kufanele abe nokuqonda okubanzi kwamakhasimende ahlukene okudingeka abanikeze imikhiqizo noma amasevisi adingekayo kuphela.
Ngesikhathi esifanayo, ukudala okuqukethwe okufanelekile nakho kuyindaba okufanele icatshangelwe. Ngokuvamile, ungase ucabange ukuthi i-SEO yamazwe ngamazwe isho nje ukuthi unomxholo ohlangene ozayo ngesiNgisi nsuku zonke. Kodwa isimo asilula njengoba singase sibonakale ekuqaleni. Into ewukuthi ukusebenzisa imigomo esemqoka ye-SEO yamazwe ngamazwe kusho ukugcina engqondweni nokwenza kahle ukusetshenziswa kwamasu ahlukene okuhambisana nokuhlala endaweni, ehambisana nezici eziningi zobuchwepheshe bokusesha ukucinga. Ngaphezu kwalokho, kusukela embonweni wezamakethe wokuthengisa, ukuphatha i-SEO efanele yamazwe omhlaba jikelele kungase kube umsebenzi ophelele futhi owedlula isikhathi. Ngezansi ngizobheka ubuciko amacebo aphakathi kwakho ukuze unikezwe amandla nge-SEO yamazwe omhlaba osebenza kahle, futhi ukwandise amandla okuthengisa cishe cishe wonke amaphrojekthi e-intanethi.
Dlulela kuzo zonke izidingo zesifundazwe
Ukucabanga emhlabeni wonke, uzothola ukuthi ngisho neGoogle ngokwayo inezinhlobo ezahlukene zokuqukethwe kanye nezakhiwo ezihlukahlukene eziboniswe emakhasini wokuphumela enjini (SERPs) ezizweni ngalinye. Ngisho ukuthi umbuzo othize wegama elingukhiye ungaletha impendulo ehlukile ezweni lonke. Eqinisweni, i-Google ine-SERP yayo eyenzelwe izintshisekelo zesifunda futhi yenza okungcono ukulandela izitayela zendawo eziqine kakhulu zokuthola ulwazi lomsebenzisi kuzo zonke izindawo. Ngokuqondene namagama angukhiye kanye nezinga lomgwaqo, ngaphansi kokunciphisa okuthile okuvela ezilimini ezahlukene kanye namagama amakhemikhali wendawo. Ingxenye ebalulekile yamagama angukhiye avamile ingase ihluleke ukuthola ukuhumusha okwanele. Lokhu kufanele kucatshangelwe kuqala futhi okubaluleke kakhulu, ngokuqinisekile ukubhekwa kwabantu basekhaya, izithakazelo zamasiko, nezinye izinto eziningi ezicacile okwamanje azibonakali ngokugcwele ngisho nakubantu be-webmasters abanolwazi kakhulu. Lokho kusho ukuthi amazwe ahlukene angaba nethemba elingenakuqhathaniswa, ngisho nasembonini efanayo. Ungasho lutho ngemikhiqizo yamazwe omhlaba, ikakhulukazi ngokubhekisela kulokho abantu abafuna ukukubona ngaphambi kokugcina beza esinqumweni sokuthenga.
Thuthukisa isu lakho le-SEO yamazwe ngamazwe
Okokuqala, ukuthuthukisa isu lamazwe ngamazwe we-SEO, masithathe kalula - ukubeka kahle igama elingukhiye, isibonelo eChina, akusho Umphumela omuhle kakhulu nakwezinye izindawo emhlabeni jikelele. Ngenxa yalokho, kuzodingeka uqale nge-Optimization yangaphakathi ye-SEO, ukuqala indalo yokuqukethwe ngokuqondile izilaleli ozikhethile ezweni elilodwa. Ukwenza kanjalo, uzoqonda izitayela ezisemqoka zesigodi, kanye nokuzikhethela kwamagama angukhiye adingekayo kakhulu. Futhi, kuyodingeka ufake izicelo ezithile zezobuchwepheshe ze-SEO ezingeni eliphakeme kakhulu lomhlaba wonke. Ngisho ukuthi uzodinga ukushumeka amakhasi akho wewebhu ngamathegi we-hreflang.
Ngokuvamile, i-hreflang tag imelela ingxenye yekhodi esetshenzisiwe yi-Google ukuthola izwe elihlosiwe, ngakho-ke ulimi lokuqukethwe kwewebhusayithi yakho. Izokusiza ukuthi uqiniseke ukuthi okuqukethwe okulungile kuboniswa esifundeni esifanele kahle. Isibonelo, ngisho nangaphakathi kolimi lwesiSpanishi, kuzoba nokubaluleka okubalulekile kolwazi uma uhlela okuqukethwe kwakho eSpain uqobo, futhi isibonelo sibonise abasebenzisi base-Argentina. Ukusebenzisa amathegi we-hreflang kuzokunika amandla okuqukethwe kwakho ngokuhlangenwe nakho okungcono komsebenzisi ngokungeza ukuhambelana okunye emibhalweni yakho.
Ngesikhathi esifanayo, ukusebenzisa amathegi we-hreflang kusiza ukunciphisa usongo olungenzeka lokuqukethwe okuphindwe kabili, utshele i-Google ukuthi okuqukethwe okubhaliwe kubhalwa izethameli ezihlukile ngenhloso. Ukuqalisa ngokumaka okuqukethwe kwakho, ngincoma ukusebenzisa i-ISO 639-1 yezolimi ngalunye ulimi, ngokuhambisana nokuba nazo zonke izindawo zakho ze-sitemaps azifiki ngaphezu kwama-URL angu-10, noma ukuzithola zibe izingxenye eziningana futhi. Ngezansi izinhlelo ezi-3 eziyinhloko zokuqinisekisa ukuthi okuqukethwe kwakho kufakwe ngamathegi we-hreflang ngokufanele:
Thola isipele sakho se-HTTP nge-hreflang tag ukuze uqiniseke ukuthi liza nazo zonke ikhasi lewebhu
ama-sitemaps akho afakwe ngamathegi we-hreflang
Thola ikhasi lewebhu ngokwalo elimakwe uphawu
Thola amasu akho asendaweni futhi ahlangene
Masithathe kalula-ukwenza okwenzekayo kwi-SEO yamazwe ngamazwe akusho ukuhumusha kokuqukethwe okulula kwamakhasi wewebhu athile. Kufanele sikwazi ukubhekana nayo - ukwakha indawo enokwethenjelwa kusho ukusungula imibhalo yokuqukethwe okuzohambisana nakakhulu nalabo abathintekayo bendawo kanye nezitayela zokusesha. Ngisho ukuthi kuzodingeka ukhethe ucwaningo olwengeziwe lwegama elingukhiye ezweni ngalinye okhuluma nalo. E. g. , uma uzofihla izindawo eziningi nebhizinisi lakho, ngiphakamisa ukuthi kunamakhasi ahlukile wokufika futhi, okuyiqiniso, okuqukethwe okuhlukile ukuze bathole ukubonakala okungcono kwendawo, kanye nawo wonke amakhasi omphumela we-injini yokusesha.
Ungalokothi uhlose ukukhokha isikhathi sakho nemizamo yokuqoqa izinhlelo zakho zokuthuthukisa izinhlelo zomhlaba jikelele, zendawo, nezelula ukuze uthole isu elihle ngempela le-SEO. Ngikisela ukwakha uhlu lokubaluleka kokuqala, ukuqala ngalawo mazwe angase akwazi ukuhlinzeka ngamakhasimende amaningi angakhona owafunayo kumakethe wakho emakethe. Isibonelo, uma ubhekene nabasebenzisi baseShayina, kungcono ukuthi ucabange ukuthi abangaphezu kuka-95% wabasebenzisi be-intanethi basendaweni abaphequlula nge-intanethi ngamadivayisi aphathekayo. Yingakho ama-brand afuna ukunqoba umncintiswano kufanele abe nokuqukethwe kwawo okushintshe ngokuphathelene nokuphendula kweselula.
Ekugcineni, ungalokothi ukhohlwe ukukala imiphumela yecebo lakho le-SEO lamazwe ngamazwe ngokuthatha izilinganiso eziqaphele zokusebenza kwakho kwamanje. Yenza isheke kabili kuwo onke amamethrikhi akho ngaphakathi kwesifunda ngasinye esihlosiwe ngaso sonke isikhathi ngangokunokwenzeka. Khumbula njalo ukulandelela izikhundla zakho, nokuqinisekisa ukuthi amakhasi akho wewebhu ahlelwe kahle ngezwe ngalinye noma esifundeni ngasinye. Phela, ungazizwa unamahloni okusebenzisa ikhono eliphakeme le-PPC ukwandisa emakethe amasha. Ukusebenzisa kahle i-PPC ngaphakathi kweqhinga lakho le-SEO lomhlaba jikelele kuzokusiza uthole ukuqonda kangcono ukuziphatha kwendawo, ukuguqulwa kwamathrendi, kanye nokuthola ithrekhi engcono ezweni elisha Source .